ပြန်လည်စတင်တော့မယ့် စီးရီးအေ ရာသီသစ် နဲ့ မေးခွန်း ၅ ခု - SPORTS MYANMAR
ပြန်လည်စတင်တော့မယ့် စီးရီးအေ ရာသီသစ် နဲ့ မေးခွန်း ၅ ခု
အီတလီ စီးရီအေ ရဲ့ ရာသီသစ် အဖွင့် ပွဲစဉ်တွေကို ယခုအပတ် ကစပြီး ယှဉ်ပြိုင် ကစား သွားတော့ မှာပါ ။ ဥရောပ ထိပ်သီး လိဂ် ၅ ခု ထဲမှာတော့ စီးရီးအေ ဟာ နောက်အကျဆုံး စတင်တဲ့ လိဂ် ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ကလပ် အသင်းပေါင်း ၂၀ ဟာ ပွဲစဉ် ၃၈ ပွဲ ၊ အချိန်အားဖြင့် ဆယ်လ ကျော် ကစားရမယ့် ခရီးရှည်ကြီး အတွက် မျှော်လင့်ချက် များစွာနဲ့ စတင် ခရီးထွက်ခွာ ကြရတော့မှာပါ ။ အဆုံးသတ်မှာတော့ ဘယ်သူတွေ ပျော်ရွှင်မလဲ ၊ ဘယ်သူတွေ ဝမ်းနည်း ကြေကွဲရမလဲ ဆိုတာကို သိရဖို့ ကတော့ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး ။
ဒီနှစ် စီးရီးအေ ဟာ အရင်နှစ်တွေကထက် စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ရှိနေပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ တုန်းက စီးရီးအေမှာ ယူဗင်တပ် ရဲ့ ကြီးစိုးမှုကို အင်တာမီလန် တို့ ချိုးဖျက်ပြနိုင်ခဲ့ပြီး ဒီရာသီ မှာရော ဒါမျိုး ထပ်ပြီး ပြန်ဖြစ် မလား ၊ ယူဗင်တပ် က ပဲ သူတို့ရဲ့ မူပိုင်လို ဖြစ်နေတဲ့ အမှတ်ပေးဖလားကြီးကို ပြန်လည် ရယူ သွားမလား ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ ။
နောက်ပြီး မော်ရင်ဟို ရဲ့ တကျော့ပြန် အီတလီ ခရီးစဉ် ၊ အင်တာမီလန် ရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ကလည်း ဘာတွေ ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်မယ် ဆိုတာ သိချင်စရာ ကောင်းနေမှာပါ ။ ဒါကြောင့် ဒီနှစ် စီးရီးအေ ရာသီသစ် အတွက် သိချင်စရာ ကောင်းတဲ့ မေးခွန်း ၅ ခုကို ရွေးထုတ် တင်ပြလိုက်ရ ပါတယ် . . .
၁ ။ အင်တာမီလန် ဘယ်လဲ ဘာလဲ
ဒီနှစ် စီးရီးအေ အတွက် အမေးချင်ဆုံး မေးခွန်းကတော့ အင်တာမီလန် တို့ ဆက်ပြီး စိုးမိုးနိုင်ပါ့မလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ ။ ချန်ပီယံဆုကို ရယူပေး ခဲ့တဲ့ နည်းပြ ကွန်တီ မရှိတော့သလို အားထားရတဲ့ တိုက်စစ်မှူး လူကာကူ ၊ နောက်တန်း က ဟာခီမီ တို့ကို နွေရာသီမှာ အင်တာတို့ စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ် ။ အခု အင်တာကို အင်ဇာဂီ လက်ထဲ ထည့်လိုက်ပါပြီ ။ အင်အား ဖြည့်တင်းမှုက အားရစရာလို့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး ။ ဒီလူတွေ ၊ ဒီနည်းပြ နဲ့ အင်တာတို့ စီးရီးအေ ဖလားကို ကာကွယ်နိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စား စရာပါပဲ ။
၂ ။ ယူဗင်တပ် တို့ ပြန် စိုးမိုး နိုင်မှာလား
အင်တာမီလန် က ချန်ပီယံ နည်းပြ ကို လက်လွှတ်လိုက်ပေမယ့် ယူဗင်တပ် ကတော့ ချန်ပီယံ နည်းပြ အယ်လီဂရီ ကို ပြန်ပြီး ခန့်အပ် ခဲ့ပါတယ် ။ အယ်လီဂရီ ဟာ သူ ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ နှစ်တိုင်းမှာ ယူဗင်တပ်ကို အမှတ်ပေး ချန်ပီယံ ဖြစ်စေရုံသာမက ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ ကိုပါ ၂ ကြိမ် အရောက်ပို့ပေး ခဲ့တာပါ ။ လက်ရှိ ယူဗင်တပ် ဟာ သက်ကြီးကစားသမားတွေကို တဖြည်းဖြည်း ရှင်းထုတ်နေပြီး လူငယ်တွေနဲ့ သွေးသစ် လောင်းနေပါပြီ ၊ အပြောင်းအရွှေ့မှာလည်း အားကိုးရလောက်တဲ့ လူတွေကို ခေါ်ယူထားပါတယ် ။ ဒီလူတွေ နဲ့ အယ်လီဂရီ ဘာလုပ်ပြ နိုင်မလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ ။
၃ ။ ရိုနယ်ဒို ကရော ဆက်ပြီး တောက်ပနိုင်ဦးမှာလား
ယူဗင်တပ် မှာ လူငယ်တွေ တဖြည်းဖြည်း နေရာရလာ ပေမယ့် ဖယ်ထုတ်လို့ မရသေးတဲ့ ဝါရင့်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ တွေ ရှိနေ ပါသေးတယ် ။ အဲ့ဒိ အထဲက တခုကတော့ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒိုပါပဲ ။ ၃၆ နှစ် ကျော်ပြီ ဖြစ်တဲ့ တိုက်စစ်မှူးကြီးဟာ အသင်းရဲ့ အဓိက ဂိုးသွင်းရှင် ဖြစ်နေဆဲပါ ၊ မနှစ်က စီးရီးအေ မှာလည်း ဂိုးသွင်း ဘုရင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
အီတလီ မှာ ကစားတဲ့ ၃ ရာသီမှာ ရိုနယ်ဒို ဟာ ၂၁ ၊ ၃၁ ၊ ၂၉ ဂိုးတွေ သွင်းယူခဲ့တာပါ ။ အနည်းဆုံး တရာသီကို ဂိုး ၂၀ သွင်းနိုင်ခဲ့ တယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ ။ ဒါကို ဒီရာသီမှာ ထပ်လုပ်ပြနိုင်မလား . . . ၃၇ နှစ် အရွယ်မှာ တရာသီ ဂိုး ၂၀ နဲ့ အထက် သွင်းနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဖလားရသည် ဖြစ်စေ မရသည်ဖြစ်စေ ရိုနယ်ဒို ကို ချီးကျုးရမှာပါပဲ ။
၄ ။ မော်ရင်ဟို ၊ အေဘရာဟမ် နဲ့ ရိုးမား
ရိုးမား ကို မော်ရင်ဟို ပြောင်းရွှေ့ လာတာ တကယ်ကို အံ့သြဖို့ ကောင်းပါတယ် ။ ထင်မှတ်မထားတဲ့ ရွှေ့ကွက် ပါပဲ ။ ပေါ်တူဂီသားကြီး ဘာတွေ ကြံစည်နေလဲဆိုတာ ကိုတော့ သူကိုယ်တိုင်ပဲ သိနိုင်မှာပါ ။ အင်တာမီလန် နဲ့ ဒုတိယမြောက် ရာသီမှာ ဖလား ၃ လုံး အောင်ပွဲကို မော်ရင်ဟို ၂၀၁၀ တုန်းက ရယူနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ရိုးမား ရဲ့ အနေအထားက ဒီလို အဆင့်မျိုးကို ရောက်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ သံသယ ဖြစ်စရာပါပဲ ။
တမ်မီ အေဘရာဟမ် ရဲ့ စွန့်စားခန်း ကလည်း မော်ရင်ဟို နဲ့ အတူ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေမှာပါ ။ အင်္ဂလန်သားလေး အတွက်တော့ မအောင်မြင်တဲ့ အင်္ဂလန်က ဘဝကို စွန့်ခွာရင်း ရောမမြို့မှာ တဖန်ပြန်လည် တောက်ပ လာခဲ့တဲ့ ဘဝတူ ချဲလ်ဆီး စီနီယာကြီး မိုဟာမက် ဆာလာ ရဲ့ ဇာတ်လမ်းက စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေ ဖြစ်စေမှာပါ ။ မိုဆာလာ ရဲ့ ခြေရာကို လိုက်နင်းနိုင်မလား ဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့် ရမှာပါပဲ ။
ROME, ITALY – AUGUST 15: AS Roma new signing Tammy Abraham meets AS Roma Coach Josè Mourinho during medical tests on August 17, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)
၅ ။ အေစီမီလန် တို့ ဥရောပဝင်ခွင့်ကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်မှာလား
ရာသီပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်း အပြီးမှာတော့ အေစီမီလန် ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် တကျော့ပြန် အိပ်မက်ဟာ အမှန်တကယ် ဖြစ်လာခဲ့ ပါပြီ ။ ဥရောပ မှာ အောင်မြင်တယ် မမြင်ဘူး ဆိုတာထက် ရာသီအကုန်မှာ သူတို့ မနှစ်က လို Top Four ထဲကို ဆက်ပြီး ဝင်ရောက်နိုင်မလား ဆိုတာက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေမှာပါ ။ ဥရောပ ဝင်ခွင့်ကို ဆက်တိုက် ရယူနိုင်မှသာ အသင်းရဲ့ အရှိန်အဝါက ပြန်တက်လာမှာပါ ။ တချိန်က အေစီမီလန်လို ပြန်ဖြစ်ဖို့ ကတော့ အဝေးကြီးလိုနေသေးတယ်လို့ ဆိုရမှာပါပဲ . . .
စီးရီးအေ ပွဲစဉ် ( ၁ ) ပွဲချိန်များ
အင်တာမီလန် – ဂျီနိုအာ ( မြန်မာစံတော်ချိန် စနေနေ့ ည ၁၁း၀၀ နာရီ )
ဗီရိုနာ – ဆာဆူအိုလို ( မြန်မာစံတော်ချိန် စနေနေ့ ည ၁၁း၀၀ နာရီ )
အမ်ပိုလီ – လာဇီယို ( မြန်မာစံတော်ချိန် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၁း၁၅ နာရီ )
တိုရီနို – အတ္တလန်တာ ( တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၁း၁၅ နာရီ )
အူဒီနီးစ် – ယူဗင်တပ် ( တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၁၁း၀၀ နာရီ )
ဘိုလော့နာ – ဆလာနီတာနာ ( တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၁၁း၀၀ နာရီ )
ရိုးမား – ဖီအိုရင်တီးနား ( တနင်္လာနေ့ နံနက် ၁း၁၅ နာရီ )
နာပိုလီ – ဗီနီဇီးယား ( တနင်္လာနေ့ နံနက် ၁း၁၅ နာရီ )
ကာဂလီယာလီ – စပီဇီယာ ( တနလာနေ့ ည ၁၁း၀၀ နာရီ )
ဆမ့်ဒိုးရီးယား – အေစီမီလန် ( အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၁း၁၅ နာရီ )